Adshares စျေး - အွန်လိုင်း ADST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Adshares (ADST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Adshares (ADST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Adshares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ADST – Adshares
Market ကဦးထုပ်: $222 600.00
volume_24h_usd: $35 632.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Adshares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Adshares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AdsharesADST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.182AdsharesADST သို့ ယူရိုEUR€0.154AdsharesADST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.14AdsharesADST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.166AdsharesADST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.63AdsharesADST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.15AdsharesADST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.04AdsharesADST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.68AdsharesADST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.241AdsharesADST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.254AdsharesADST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.07AdsharesADST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.41AdsharesADST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.99AdsharesADST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.62AdsharesADST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.30.67AdsharesADST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.25AdsharesADST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.277AdsharesADST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.66AdsharesADST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.26AdsharesADST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥19.46AdsharesADST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩215.56AdsharesADST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦69.82AdsharesADST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽13.45AdsharesADST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.01
AdsharesADST သို့ BitcoinBTC0.00002 AdsharesADST သို့ EthereumETH0.000474 AdsharesADST သို့ LitecoinLTC0.00335 AdsharesADST သို့ DigitalCashDASH0.00201 AdsharesADST သို့ MoneroXMR0.00205 AdsharesADST သို့ NxtNXT14.21 AdsharesADST သို့ Ethereum ClassicETC0.0268 AdsharesADST သို့ DogecoinDOGE52.56 AdsharesADST သို့ ZCashZEC0.00221 AdsharesADST သို့ BitsharesBTS5.61 AdsharesADST သို့ DigiByteDGB5.83 AdsharesADST သို့ RippleXRP0.647 AdsharesADST သို့ BitcoinDarkBTCD0.00628 AdsharesADST သို့ PeerCoinPPC0.604 AdsharesADST သို့ CraigsCoinCRAIG82.99 AdsharesADST သို့ BitstakeXBS7.77 AdsharesADST သို့ PayCoinXPY3.18 AdsharesADST သို့ ProsperCoinPRC22.85 AdsharesADST သို့ YbCoinYBC0.0001 AdsharesADST သို့ DarkKushDANK58.45 AdsharesADST သို့ GiveCoinGIVE394.51 AdsharesADST သို့ KoboCoinKOBO41.5 AdsharesADST သို့ DarkTokenDT0.168 AdsharesADST သို့ CETUS CoinCETI526.08
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 23:45:02 +0000.